June 8, 2020 - Khitalin Media
မိုးကြိုးအန္တရာယ်က ရှောင်ရှားရန် လိုက်နာရမည့် အချက်များ …
June 8, 2020 Khitalin Media 0
ယခုမိုးရာသီ မိုးကြိုးပစ်ခံရခြင်းကြောင့် သေဆုံးသူ ၆၂ ဦးရှိပြီဖြစ်၍ မိုးကြိုးအန္တရာယ် ရှောင်ရှားရန် လိုက်နာရမည့် အချက်များ ယခုနှစ် မိုးရာသီသည် မုတ်သုံအဝင်နောက်ကျ ၍ မိုးတိမ်တိုက် များပြားနေ ခြင်းကြောင့် မိုးကြိုးပစ်ခြင်း အန္တရာယ် စိုးရိမ်းရပြီး လက်ရှိမိုးကြို ကာလအတွင်း မိုးကြိုးပစ်ခံရ၍ သေဆုံးသူ ၆၂ ဦးရှိပြီဖြစ်သည်။ […]
ရေနွေး ထဲ ဂျင်းထည့်ပြီး အိပ် ခါနီးတိုင်း သောက်ပေး ရင် ရရှိလာ မယ့် အံ့မခန်း အကျိုးကျေးဇူးများ… ဂျင်းမှာ သတ္တုဓာတ်ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ ပိုတက်ဆီမယ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ ကော့ပါးသတ္တုတွေ ပါဝင်တာကြောင့် နေ့စဉ် မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ ဓာတ်စာတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ည အိပ်ရာဝင်ခါနီးတိုင်း […]
လောကမှာ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးနဲ့အယုတ်ညံ့ဆုံးလုပ်ရပ် …..
လောကမှာ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးနဲ့အယုတ်ညံ့ဆုံးလုပ်ရပ်တွေထဲမှာသူတစ်ပါးအိမ်ထောင်ကိုဖြိုခွဲတာလည်းတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုလူတွေက ယာယီတော့ ပျော်ရွှင်ရမယ်ဒါပေမယ့်ဘယ်တော့မှ ငြိမ်းချမ်းမှု၊ ပျော်ရွှင်မှုကိုရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး သူတစ်ပါးမိသားစုကိုဖြိုခွဲတဲ့သူတွေ၊ဖောက်ပြန်တဲ့သူတွေခံစားရမယ့်အရာတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် အားလုံးလည်း သတိထားဆင်ခြင်နိုင်ကြပါစေ။ (၁) ပူလောင်ခြင်း သူတစ်ပါးအိမ်ထောင်ကိုဖြိုခွဲတဲ့သူတွေနဲ့ ဖောက်ပြန်တဲ့သူတွေ အမြဲတမ်းခံစားနေရမယ့်အရာကတော့ပူလောင်ခြင်းပါပဲသူတို့ရင်ထဲမှာ နောင်တရသလိုလို၊ ကျေနပ်သလိုလိုမှားနေသလိုလို၊ မှန်နေပြန်သလိုလို မသေချာမရေရာတဲ့ခံစားချက်တွေ အမျိုးမျိုးဖြစ်နေပြီး ဘယ်တော့မှအေးချမ်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးတစ်ခါတလေအလိုလိုနေရင်း ဒေါသတွေထွက် ရှူးရှူးရှားရှားတွေဖြစ်ပြီးဘာတွေကိုဒေါသထွက်လို့ထွက်မှန်းမသိအောင်ကို ပူလောင်ပြီး […]
ဝိတ်လဲကျစေပြီး နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရောဂါများလဲ ပျောက်ကင်းစေတဲ့ဆေးနည်း …
” နှလုံးသွေကြောကျဉ်းခြင်း နှလုံးသွေးကြောပိတ်ခြင်းတို့အတွက် ” အပါ့အတွက် ဆေးကြိုပေးရင်း တကယ်ကောင်းလို့ နည်းလမ်းလေး တင်ပေးလိုက်တယ်နော် ……… အရင်က နှလုံးအတွက် သုံးလတခါဆေးခန်းပြနေရပြီး ယခုဆေးသောက်ပြီးတနှစ်တခါ ဆေးစစ်ဆေးမှု့ပြုရပါသည် ။ ရေရှည်စွဲသောက်ရင် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း နှလုံးသွေးကြောပိတ်ရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေပါသည်။ ။ ” ဆေးဖေါ်စပ်နည်း ” [ […]
မန္တလေး အောင်မြေသာစံမြို့နယ်မှာ အသက်(၂၅)နှစ်အရွယ် လူငယ်တစ်ဦးရုတ်တရက်လဲကျသေဆုံးနေ
မန္တလေး အောင်မြေသာစံမြို့နယ်မှာ အသက်(၂၅)နှစ်အရွယ် လူငယ်တစ်ဦးရုတ်တရက်လဲကျသေဆုံးနေ ၈ ၆ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၁၃၃၀နာရီအချိန့ခန့်တွင်မန်း‌လေးအောင်မြေသာစံမြို့နယ် မင်းတဲအီကင်းရပ်ကွက်ရတနာမဉ္ဇူဘုရားအနီးရှိဓမ္မာရုံရှေ့တွင် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်အမှတ်အရ ရှမ်းပြည်နယ် မဘိမ်းမြို့နယ်ဘဟဲကျေးရွာဟုပါရှိသူ အသက်၂၅နှစ်အရွယ်ဘ/ဦီးကျော်တင့်ဦး ၏သားဖြစ်သူမောင်ချစ်လင်းနိုင်သည်မှောက်လျက်လဲကျသေဆုံးနေ သူဘာ့‌ကြောင့်သေဆုံးလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးလျက်ရှိပါကြောင်းကနဦးသိရှိရသူမိဘဆွေမျိုးတွေသိစေချင်လို့ပါ MoemyintKoko ယခုဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ကပ်ရောဂါကြောင့် မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ပဲ ဆုတောင်းရမှာပဲ တကယ်လို့များ ကိုဗစ်ကြောင့် သေတယ်ဆိုရင်တော့ အကုန်မျိုးကန်းဖို့သာ ပြင်ထားကြပေတော့ ကိုဗစ်ကို […]
ဆန္ဒကို သိက္ခာနဲ့ ထိန်းပါ ညီမလေး။ ကျားဆိုတဲ့သတ္တဝါတွေက ယုံမှတ်လို့ ပုံအပ်မိတာနဲ့…..
ချစ်သူရည်းစား ဘဝမှာ ချစ်သူရည်းစားလိုပဲနေစမ်းပါ ညီမလေးရာ။ ယောင်လို့တောင် လင်မယားလိုတော့ မနေချင်စမ်းပါနဲ့။ စိတ်ကူးတောင် မယဉ်မိစေနဲ့။ ဆန္ဒကို သိက္ခာနဲ့ ထိန်းပါ။ ကျားဆိုတဲ့သတ္တဝါတွေက ယုံမှတ်လို့ ပုံအပ်မိတာနဲ့အကုန်ခက်အောင် လုပ်သွားတဲ့ အဆီစားအသားပါမျိုပြီး အသွေးပါ သောက်တဲ့အမျိုး။ အစာဝလို့ ဌာနပြန်ချင်ပြီဆိုSorry ပါဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးတောင်ဝတ်ကျေတမ်းကျေ ပြောတာမဟုတ်ပဲ……. သစ်စိမ်းချိုး […]
မြင်းခြံတွင် တလင်းပြင် နှမ်းသိမ်းနေသည့် မိသားစုဝင် ငါးးဦး မိုးကြိုးပစ်ခံရပြီး သုံးဦးသေဆုံး မြင်းခြံမြို့နယ် မြောက်ကျွန်းကျေးရွာတွင် ရွာအပြင်ဘက် တလင်းပြင်၌ နေလှန်းထားသည့် နှမ်းများ ရုတ်သိမ်းနေသည့် မိသားစုဝင်ငါးဦး မိုးကြိုးပစ်ခံရသဖြင့် သုံးဦးသေဆုံးပြီး တစ်ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု ဇွန်(၆)ရက် ညနေပိုင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ရွာအပြင်ဘက်ရှိ နှမ်းတလင်းတွင် […]
အိမ်တစ်အိမ် ရဲ့ စီးပွားရေး ကို လုံးဝ ပျက်စီးသွားနိုင်တဲ့ ယိုပေါက်ကြီး (၆) ခု …
မြတ် စွာဘုရား ဟောထားတာကတော့ လောကမှာ စီးပွားရေးပျက်ရာ ၊ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရဲ့ ယိုပေါက်ကြီး ၆ခုဆိုတာပစ္စည်းဥစ္စာဟာ ဘယ်တော့မှ မတည်ဘူးတဲ့…မြန်မာတွေကတော့ ပြောကြတယ်“လူမိုက်နဲ့ငွေ” အတူမနေဘူးတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဟာ ပျောက်သွားတယ်။ မြတ်စွာဘုရားက ဘာကိုဟောသလဲဆိုရင်နံပါတ်(၁)က အာလသျ – လူပျင်းနဲ့ဆိုရင် ငွေဟာ အတူမနေဘူးတဲ့။ပျင်းရိလို့ရှိရင် ပျင်းတယ်ဆိုတာ ပူလွန်းတယ်၊အေးလွန်းတယ်၊ မိုးချုပ်လွန်းတယ်၊ ဆာနေသေးတယ်၊မစားရသေးဘူး၊ စားပြီးပြီ၊ […]
မှိုကြိုက်တတ်ရင် ဒါလေးတွေ သိထားပါ
စားကောင်းသောမှို ဟုတ်မဟုတ် ခွဲခြားနည်း မှိုနှင့်တွဲမစားသင့်သောအရာများ ဈေးများတွင် မှိုများလှိုင်လှိုင်ထနေသည်။ မှိုကြိုက်တတ်ရင် ဒါလေးတော့ဖတ်လိုက်ပါ။ ၁။ မှိုများရရှိသောအခါ အရိုးကိုလက်ဖြင့် ဖျစ်ကြည့်လျှင် ကြေမွသားလျှင် မစားကောင်းပါ။ စားကောင်းသောမှိုများသည် ကြေမွသွားခြင်းမရှိပါ။ ၂။ မှိုပေါ်သို့ ဆားအနည်းငယ် ဖြူးကြည့်လိုက်ပါ မည်းသွားလျှင် မစားရပါ။စားကောင်းသောမှိုသည် ဆားထိရုံနှင့် မည်းသွားလေ့မရှိပါ။ ၃။ […]
မနက်ခင်း၈နာရီခွဲ အချိန်လောက်မှာအသက် ၈၀ အရွယ် အဘိုးအိုတစ်ယောက်ဆေးရုံကို ရောက်လာသောအခါ …
ဆေးရုံတစ်ခုလုံး အလုပ်များလွန်းနေတဲ့တစ်နေ့ မနက်ခင်း၈နာရီခွဲ အချိန်လောက်မှာအသက် ၈၀ အရွယ် အဘိုးအိုတစ်ယောက်ဆေးရုံကို ရောက်လာတယ်။ အရင်တစ်ပတ်ကခွဲစိတ်ထားတဲ့ သူ့လက်ပေါ်က ချုပ်ရိုးကို ပြန်ဖြေဖို့ ရောက်လာတာပါ။ သူက ဆေးရုံရောက်ရောက်ချင်းပဲ ကျွန်တော့ကို ပြောတယ်…. “ကိုးနာရီလောက်မှာ အဖိုး ချိန်းထားတာလေးတစ်ခု ရှိလို့ အရင်လိုနေတယ်..အဖိုးကို အမြန်လုပ်ပေးပါ လူလေးရယ် …” […]